सजिवन र यसका फाइदाबारे जान्नुहोस् - Grameen Khabar
२०७७ चैत्र २९, आईतवार १३:१८
विराटनगर, २९ चैत । सजिवनलाई नेपालको पहाडी क्षेत्रमा शितलचीनि र तराइमा सोहिजन भनेर चिनिन्छ । अंग्रजीमा भने moringa, horseradish tree, drumstick भनिन्छ । यो मोरिङ्गगेसि परिवार भित्र पर्ने विरुवा हो भने यस्को वानस्पतिक नाम मोरिंगा ओलिफेरा हो ।
यसको विरुवा एउटा काण्ड भएको तर हाँगाहरु तलतिर झुकेका हुन्छन् । सवैभन्दा राम्रो पहिचना त यस्को रुद्राक्षको जस्तो लामो कोशा फल लाग्दछ । त्यसैले त यसलाई ड्रम बजाउने लठी जस्तो कोशा भएको विरुवा भनिएको होला ।
यो कमलो प्रकृतिको छिटो वढ्ने इपिल इपिलको जस्तो पात भएको तर जरा टाढा टाढा सम्म फैलिने र १ मिटर जति अग्लो भएपछि मुलस्तम्भवाट हाँगा पलाउन थाल्दछ । यस्को अनारको जस्तै हिउदमा ९० प्रतिशत सम्म पात झर्दछ । प्राकृतिक रुपमा हुर्किएको विरुवा १५–२० फिट सम्म अग्लो र हाँगाहरु १० मिटर परसम्म फैलिएका हुन्छन् । व्यवसायिक रुपमा खेति गर्दा भने विरुवाको काँटछाट गरेर १–२ मिटर उचाई मात्र राख्ने गरिन्छ ।
ऐतिहासिक लिखतलाई अध्ययन गर्दा यस्को वहुउपयोगिताको महत्वलाई मध्यनजर गर्दै यस्को खेति भारतिय उपमहाद्धिपमा परापुर्वकाल देखि गरिदै आएको तथ्यपुर्ण प्रमाणहरु पाइन्छ ।
यो विरुवा ताप तथा सूर्य मन पराउने(sun and heat – loving plant) र हिउ तथा वरफ पर्ने अवस्था सहन सक्दैन । यस्को खेति गर्मि किसीमको हावापानी र सुख्खा क्षेत्रमा( dry region) सफलता गर्न सकिन्छ । सामुनिपातिक वितरण भएको ५००—१००० मि.मि.वर्षा हुने क्षेत्रमा यस्को खेति राम्रोसंग फष्टाउछ ।
यस्को खेति सवै प्रकारको रुख्खो सुख्खो माटोमा गर्न सकिने भएता पनि निकासयुक्त दोमट माटो drainable dry, sandy or slit solif मा विरुवाको वृद्धि विकास राम्रो हुने गर्दछ ।
१. जाफना:- यो भारतको तमेलनाडु क्षेत्रमा मुख्य रुपले खेति गरिन्छ । यस्को कोशाहरु ६०— ९० से.मि. लामो, नरम, स्वादिलो गुदि हुन्छ । यो प्रजाति श्रीलंकावाट भित्रीएको अनुमान गरिन्छ ।
२. चेम्मुरुंगाई :- फलको टुप्पो रातो भएको, फूल वर्षभरी लाग्दछ र उत्पादन अन्य जातको भन्दा वढि हुन्छ ।
यस्ता छन् यसका २० गुणहरू
सजिवन या सजिवनको पात सितलचिनी सेवन गर्नाले शरीरमा रहेको विकारयुक्त रगत शुद्धीकरण हुन्छ।
हड्डी मजबुत बनाउन भूमिका खेल्छ।
कोलेस्टेरोल लेबललाई नियन्त्रणमा राख्न मद्दत गर्छ।
उच्च रक्तचाप नियन्त्रण गर्न विशेष भूमिका हुन्छ।
रोघा–खोकी जस्ता संक्रमण हुनबाट जोगाउँछ।
गर्भावस्थामा आउने विभिन्न समस्यालाई नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्छ।
छालासम्बन्धी संक्रमणबाट जोगाउँछ।
सजिवन पोषणयुक्त सब्जी भएको हुनाले कुपोषण हुनबाट जोगाउँछ।
सजिवनको पातलाई सितलचिनी अर्थात् मोरिङ्गा भनेर चिनिन्छ, जुन आयुर्वेदिक क्षेत्रमा ३ सयभन्दा बढी रोग निदान गर्छ भनिएको छ।
सजिवनले खाना पचाउन पनि ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ।
सजिवनको कोसा, पात, डाँठ, फूल, मुन्टा, जरा प्रयोगमा आउने हुँदा व्यावसायिक हिसाबले पनि उच्चकोटीको वनस्पति मानिन्छ, जसले मनग्य आम्दानी दिन्छ।
सजिवनको जारा कुटेर रस नियमित खानाले किड्नीमा रहेको पथ्थरी हटाउन मद्दत गर्छ।
सजिवनको पात नियमित सेवन गर्नाले मस्तिष्कसम्बन्धी समस्या समाधान गर्छ।
कलेजो खराब हुनबाट जोगाउँछ।
चोट–पटकलाई छिटोभन्दा छिटो निको बनाउन मद्दत गर्छ।
छालाका लागि सजिवनको पत्ता उपयोगी मानिन्छ।
सजिवनको तेल कपालका लागि उत्तम मानिन्छ।
मुटुसम्बन्धी विभिन्न रोग लाग्नबाट बचाउँछ।
शरीरमा आउने निराशपन हटाएर स्फुर्ती थप्ने काम गर्छ।
पेटसम्बन्धी विभिन्न रोगहरु निदान गर्नुका साथै पेट सफा गर्ना मद्दत पुर्‍याउँछ।